အတု ထောက်လှမ်းရေး ကုမ္ပဏီ AInnovation သည် ဒုတိယအကြိမ် ဟောင်ကောင် IPO လျှောက်လွှာ ကို တင်သွင်း သည် - Pandaily
အတု ထောက်လှမ်းရေး ကုမ္ပဏီ AInnovation သည် ဒုတိယအကြိမ် ဟောင်ကောင် IPO လျှောက်လွှာ ကို တင်သွင်း သည်
Jan 04, 2022, 14:35ညနေ 2022/01/06 23:55:54 Pandaily
ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့ တွင်ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း (HKEx) မှ ထုတ်ပြန်သော စာရွက်စာတမ်း တစ်ခုအရAInnovation သည် IPO လျှောက်လွှာ ကို တင်သွင်း ခဲ့သည်UBS, CICC နှင့် China Renaissance တို့သည် ပူးတွဲ စပွန်ဆာ များဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းက AInnovation သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဇွန် လကုန် တွင်ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း သို့ စာရင်း လျှောက်လွှာ တင်ခဲ့သည်။
AInnovation သည္ အင္စတီ က်ဴး ရွင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားကို နားလည္ ရန္ အဂၤါေန႔ မွစတင္ကာ ဆက္စပ္ ေသာ ေစ်းကြက္ အႀကိဳ လႈပ္ရွားမႈကို စတင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ခန္႔ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ထားသည္။
အလားအလာ ကဖော်ပြ သည်မှာ ရန်ပုံ ငွေများကို AI ပလက်ဖောင်း ကိုအကောင်းဆုံး ဖြစ် စေရန်၊ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စွမ်းရည် များ ကိုမြှင့်တင် ရန်၊ စီးပွားဖြစ် လုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက် စေရန်၊ ဖောက်သည် များ၏ အဆက်အသွယ် များကိုပိုမို နက်ရှိုင်း စေရန် နှင့်ပိုမို မဟာဗျူဟာမြောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ ကိုပြုလုပ် ရန်အသုံးပြု လိမ့်မည်ဟု ဖော်ပြသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး AInnovation သည်တရုတ် AI ဖြေရှင်းချက် ပံ့ပိုး သူဖြစ်သည်။ ခေတ်မီ AI နည်းပညာ ကိုအသုံးချ ခြင်း၊ AI နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ထုတ်ကုန်များနှင့် စိတ်ကြိုက် စီးပွားရေး ဖြေရှင်း မှုများ ဖြန့်ဝေ ခြင်း၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ နှင့်စီးပွားရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များအား စီးပွားရေး ထိရောက်မှုနှင့် တန်ဖိုး တိုးတက် စေရန်နှင့် လုပ်ငန်း၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် အသွင်ပြောင်း မှု ကိုနားလည်သဘောပေါက် ရန် ကတိက ဝတ်ပြု ထားသည်။ နည်းပညာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူ Li Kaifu သည် ဥက္က chairman ္ဌ အဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင် ခဲ့ပြီး IPO မတိုင်မီ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော် ခဲ့သည်။
AInnovation သည်ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း သို့ လျှောက်လွှာ မတင် မီ ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု များစွာကို ပြီးစီးခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများတွင် SoftBank နှင့် CICC ကဲ့သို့သော ကမ္ဘာကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဖွဲ့အစည်း များပါဝင်သည်။
အလားအလာ အရ ၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၁ အထိ ပထမ ကိုး လအတွင်း AInnovation သည် နှစ်စဉ် ဝင်ငွေ ယွမ် ၃၇. ၂ ၀၈ သန်း၊ ယွမ် ၂ ၂၉ သန်း၊ ယွမ် ၄ ၆၂ သန်းနှင့် ယွမ် ၅ ၅၃ သန်း အသီးသီး ရရှိခဲ့သည်။ အလားတူ ကာလအတွင်း ချိန်ညှိ ထားသော အသားတင် အရှုံး မှာ ယွမ် ၄၅. ၃ ၇၈ သန်း၊ ယွမ်သန်း ၁၆၀ ၊ ယွမ် ၁၄၄ သန်းနှင့် ယွမ် ၈၀. ၉၉ ၉ သန်း ဖြစ်သည်။
Frost & Sullivan ၏အဆိုအရ AInnovation သည်တရုတ်နိုင်ငံ ၏တတိယ အကြီးဆုံး AI ဖြေရှင်းချက် ပံ့ပိုး သူဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် ကုန် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဘဏ္ services ာရေး ၀ န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအတွက် AI ထုတ်ကုန်များနှင့် ဖြေရှင်းနည်း များ ကိုထုတ်လုပ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:AI startup SenseTime ကို တရားဝင် ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း တွင် စာရင်းဝင် ခဲ့သည်: 10% ဖွင့်လှစ် မြင့် တက် နှင့် စျေးကွက် တန်ဖိုး HKD 140 ဘီလီယံ ကျော်လွန်
ကုမ္ပဏီသည် AI ပလက်ဖောင်း သုံးခု ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ManuVision အသိဉာဏ်ရှိသော စက် မြင်ကွင်း ပလက်ဖောင်း ၊ MatrixVision အသိဉာဏ်ရှိသော အစွန်း ဗီဒီယို ပလက်ဖောင်း နှင့် Orion ဖြန့်ဝေထားသော စက် သင်ယူမှု ပလက်ဖောင်း ။